FAQs - So Fine Plastic Technology Co.
Varavarana mangatsiaka sy vavahady mangatsiaka kokoa
Varavarana frizidera sy varavarana fitaratra mangatsiaka kokoa
Door-in Freezer sy varavarana mangatsiaka kokoa
Varavarana Glass Machine
Varavarana divay vita amin'ny divay
Varavarana Glass-Refrigerator Mini
Varavarana mangatsiaka sy varavarana fitaratra mangatsiaka kokoa
Door Glass LED
Fitaovana fitaratra varavarana fampirantiana varavarana fitaratra
Eny, mampiasa fonosana plywood avo lenta foana izahay na fonosana baoritra matanjaka mety amin'ny fitaterana an-dranomasina na an-habakabaka. Raha misy fepetra takiana tsy mahazatra amin'ny mpanjifa, dia mety handoa sarany fanampiny izany.
Hitako ny tsipika vokarin'ny orinasanao misy vera sy plastika, iza no vokatrao lehibe indrindra?
Raha ny marina, ny lisitry ny vokatra dia misy manaraka.
1. Fitaovana fitaratra voaroaka.
2. Vokatra fanitarana vera misy sisiny roa: ampahany amin'ny fampangatsiahana & ampahany amin'ny haingon-trano sy fananganana trano. Ny ampahany amin'ny fampangatsiahana dia ho an'ny varavarana miseho ho an'ny vata fampangatsiahana sakafo sy zava-pisotro / frizera / chiller. Ary ny ampahany amin'ny haingon-trano sy trano dia natao ho an'ny varavarankely sy varavarana fitaratra mafy kokoa. (Midika ho tsy mitambatra glazing roa na glazing roa miaraka amin'ny shutter)
3. Vokatra mifanentana fitaratra vita amin'ny vera: mombamomba ny extrusion plastika sy aluminium.
Noho izany ny tsipika famokarana fitaratra sy plastika dia tsy vitan'ny hoe afaka miara-miasa amin'ny famokarana varavarana fitaratra amin'ny zana-kazo fa afaka miasa tsy miankina ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny vokatra vera na mombamomba ny mpanjifa ihany.
Adiresy:Rihana faha-1 sy faha-2, Building A, Zone Industrial, Hongsheng, No.16 an'ny Xinlong Da Dao, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Sina